Ihe mkpuchi anụ ahụ na nke obibi | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Taa enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaahịa ngwaahịa n'ahịa karịsịa maka ụlọ.
Ndị ahịa na-achọ nhọrọ okike maka ngwaahịa sịntetik na ngwaahịa. Otu n'ime ihe kachasị mfe iji dochie bụ sịntetik eriri mkpuchi ma ọ bụ ndị ọzọ eke.
E nwere ọtụtụ ihe nkpuchi obibi ejiri eriri dị iche iche họrọ dị ka:
Aki oyibo, a nwere ike iji yarn a mee ihe maka ebe obibi ma ọ bụ ebe ọha na eze, ọ na-enye dịgasị iche iche na weft na agba. Nnukwu uru nke ụdị a bụ na ha bụ ihe okike, bụ hypoallergenic, adịghị emebi ụmụ ahụhụ ma na-achịkwa iru mmiri nke gburugburu ebe obibi A na-agwakọta yarn a na ndị ọzọ eke eriri iji nweta ngwaahịa ka mma ma jigide njirimara ha kacha mma.
El ọchị bụ a ihe onwunwe na nke nwere ike ibibi ihe, nke a na-ejikarị eme ihe mkpuchi obibi. Enwere ike iji jute mee akwa mkpuchi naanị ya ma ọ bụ jikọta ya na akwa ndị ọzọ dịka owu, sisal, eriri aki oyibo, yarn akwụkwọ, na ndị ọzọ. Jute na kapeeti na-enye ọdịdị dị nro na ọdịdị dị ọkụ, ha dị irè maka ntụgharị ọkụ na ọkara.
Ihe mkpuchi a na-amatachaghị nke ọma ma ọ bụ ezigbo obibi bụ ihe mkpuchi akwụkwọ Finnish, nke a na-akpọ nkụkọ osisi, nke ejiri 86% akwụkwọ na 14% owu mee. Ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ mana nke nta nke nta ha ga-ewu ewu karịa.
Nhọrọ ndị ọzọ metụtara obibi bụ eriri nke abaca, achara, ahịhịa mmiri na ahịhịa amị na owu, ajị anụ na ndị ọzọ. eke yarn.
Ikwesiri ileba anya na ihe mmado na ihe mkpuchi ahụ iji mata eriri ndị na-eme ha.
O nweghi ihe o mere ma ọ bụrụ na ejiri aka ma ọ bụ igwe rụọ ha, ihe dị ezigbo mkpa bụ na ihe ndị ahụ ga-emebi emebi ma jiri ụrọ sitere n'okike na-enweghị kemịkal.
Ọ ga-ekwe omume ịzụta akwa mkpuchi dị elu, nke dị mma na gburugburu ebe obibi ka enwere ọtụtụ nhọrọ ịhọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Nchekwa ike » Homelọ Green » Ihe mkpuchi anụ ahụ na nke obibi
Green ụlọ bara uru karịa na ezigbo ụlọ ahịa